पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पुस १३ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – Sandesh Press
December 28, 2021 128
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) पारीवरिक शुःख प्राप्त हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका श्रेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्नेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ । भौतिक शुःख साधन प्राप्त हुनेछ । शारीरिक आलस्यले सताउन सक्छ । पारीवारिक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । सामान्य यात्रा पश्चात कार्य सिद्यि हुनसक्ला ।तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) खर्च बढ्ने सम्भाबना रहेको छ । कुराकाट्ने हरुको बृद्धि हुनेछ । परोपकार को क्षेत्रमा मन जानेछ । नजिकका मित्र बाट धोका हुन सक्छ । प्रेमी प्रेमीका बिच मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगानीको प्रतिफल प्राप्तनहुदा मनमा खिन्नता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
Prevयिनै हुन् जनताको सेवा गर्दागर्दै मृत्यु भएका इन्जीनियर अर्जुन थापा, जस्ले पहिलो सन्तान जन्मँदा घर आउँछु भनेका थिए, मुखै हेर्न नपाई बिते
Nextकुवेतको नेस्टो सुपरमार्केटमा ठूलो संख्यामा नेपाली महिला-पुरुषलाई रोजगारको अबसर, तलब कति ?
३ छोरा छोरीको आमाले गरिन श्रीमानको योजनाबद्ध तरिकाले ह’त्या, कारण थाहा पाउदा छक्क पर्नुहुनेछ ! घटना यसरी रचिएको थियो